ACD FOTO FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
ACD Foto Foto 4.0.66
Ịgbanye vidiyo na YouTube, anyị enweghị ike igbochi ohere na n'oge ụfọdụ, onye edemede ga-enwe ọchịchọ ihichapụ vidiyo kpọmkwem site na ọwa ya. N'ụzọ dị mma, enwere ohere dị otú ahụ ma ọ bụ banyere ya na a ga-atụle isiokwu ahụ.
Wepu video site na ọwa
Usoro nke iwepụ vidiyo site na akaụntụ gị dị nnọọ mfe ma ọ dịghị achọ oge na ihe ọmụma dị ukwuu. Na mgbakwunye, e nwere ọtụtụ ụzọ, nke mere na onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ ihe maka onwe ya. N'inwekwu nkọwa ha ga-atụle n'okpuru.
Usoro 1: Ụkpụrụ
Ọ bụrụ na ị kpebie iwepụ vidiyo ahụ, ị ​​ga-abanye n'ime ụlọ mmepụta ihe. A na-eme nke a naanị: ịkwesịrị pịa akara ngosi profaịlụ gị, na window windo, pịa "Creative Studio".
Leekwa: Otu esi edebanye aha na Youtube
Lee, ị nọ n'ọnọdụ, gaa na ngwọta nke nsogbu ahụ.
Ịkwesịrị ịbanye na njikwa vidiyo. Iji mee nke a, buru ụzọ pịa sidebar "Onye nchịkọta vidiyo"wee na ndepụta nke mepee, họrọ "Video".
Ọ bụ na nkebi a ga-abụ vidiyo gị niile. Iji ehichapụ vidiyo, ịkwesịrị igosi naanị ụzọ abụọ dị mfe - pịa akụ na-esote bọtịnụ. "Gbanwee" ma họrọ site na listi "Hichapụ".
Ozugbo i mere nke a, windo ga-apụta na ị ghaghị ikwenye ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ihe niile ziri ezi na ịchọrọ ịhapụ vidiyo, wee pịa bọtịnụ ahụ "Ee".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ehichapụ vidio gị ma site na ọwa na site na YouTube dum, ihe odide ahụ na-agba akaebe na nke a: "Wepụrụ Videos". N'ezie, mmadụ nwere ike ibudata ya ma weghachite ya na akaụntụ ọzọ.
Usoro 2: Jiri Ogwe njikwa
A na-ele anya n'elu nhọrọ iji wepụ ihe ndepụta ahụ site na ngalaba ahụ. "Onye nchịkọta vidiyo", mana nke a abughi naanị akụkụ nke ị nwere ike ịmepụta ihe ndị a.
Ozugbo ị banyere n'ime ụlọ ihe okike gị, ị ga-abanye "Ogwe njikwa". N'ikwu okwu n'ụzọ dị nkpa, ngalaba a ga-egosipụta ozi niile dị mkpa banyere ọwa gị na obere ọnụ ọgụgụ, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịgbanwe ma dochie ihe njirimara nke akụkụ a n'onwe gị.
Ọ bụ maka otu esi agbanwe ngalaba "VIDIO", nke a ga-atụle n'okpuru, ọ bara uru ịkọwa ugbu a. E kwuwerị, a ga-ahazi ya iji gosi vidiyo ndị ọzọ (ruo 20). Nke a na mgbe ụfọdụ ga-akwado mmekọrịta na ihe ndekọ niile. Emere nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe.
Mbụ ị chọrọ ịpị akara ngosi akara na akụkụ aka nri nke aka nri.
Ma mgbe ahụ, na ndepụta ndepụta "Ọnụ ọgụgụ nke ihe", họrọ uru ị chọrọ.
Mgbe ị na-ahọrọ, ọ na-anọgide na ịpị bọtịnụ ahụ. "Chekwa".
Mgbe nke ahụ gasị, ị ga - achọpụta ozugbo mgbanwe ndị a - enwere ọtụtụ rollers, ọ bụrụ na, n'ezie, ị nwere ihe karịrị atọ n'ime ha. Rịba ama ihe odide ahụ: "Lee ihe niile"nke dị n'okpuru ndepụta vidiyo dum. Ịpị na ya ga-akpọrọ gị gaa na ngalaba ahụ. "Video", nke a tụlere na mmalite nke isiokwu ahụ.
Ya mere, na nchịkwa nchịkwa, enwere obere ebe a na-akpọ "VIDIO" - nke a bụ otu okwu nke ngalaba "Video", bụ nke a tụlere na mbụ. N'ihi ya, na mpaghara a ị nwekwara ike ihichapụ vidiyo ahụ, n'otu ụzọ ahụ - site na ịpị akụ ahụ na-esote bọtịnụ ahụ "Gbanwee" na ịhọrọ ihe "Hichapụ".
Nzọụkwụ 3: Nhọrọ Iwepụ
Ekwesiri iburu n'uche na ihichapu vidiyo dika ntuziaka ndi a di oke ihe di nkpa ma oburu na ichoro ikpofu otutu ihe. Ma n'ezie, ndị mmepe nke YouTube na-elekọtakwa nke a ma gbakwunye ike iji ehichapụ ihe ndekọ.
Nke a dị mfe, ma ohere ahụ na-egosi naanị na ngalaba ahụ "Video". Ịkwesịrị ịhọrọ fim na mbido. Iji mee nke a, lelee igbe dị n'akụkụ ya.
Ozugbo ị họrọla ihe niile ederede ị na-ekpebi iji kpochapụ, ịkwesịrị imepe listi ọdịda. "Omume" ma họrọ otu ihe n'ime ya "Hichapụ".
Mgbe emechara emechara, a ga-apụ na nhọrọ ịhọrọ ga-apụ na listi gị.
I nwekwara ike ikpochapu ihe niile n'otu oge. Iji mee nke a, jiri aka na-ahọrọ ha niile site na iji akara na-esote ndepụta. "Omume". Ọfọn, weghachite nhazi - mepee ndepụta, ma pịa "Hichapụ".
Usoro nke 4: Iji ngwaọrụ mkpanaka
Dịka ọnụ ọgụgụ YouTube, ndị ọrụ ji ngwa ngwa nke otu aha ahụ, kwa ụbọchị na-abanyekwu. Ya mere, onye na-eche otu esi ehichapụ vidiyo site na akaụntụ site na iji ngwaọrụ mkpanaka. Ọ dịkwa mfe ime.
Download YouTube na gam akporo
Download YouTube na iOS
Mbụ ị ga-aga na taabụ site na isi peeji "Akaụntụ".
Na ya na-aga na ngalaba "My Videos".
Na, ebe ị kpebiri ihe ndekọ ị ga-ehichapụ, pịa n'akụkụ ya na ellipsis e vericis, na-anọchite anya ọrụ ndị ọzọ, ma họrọ site na ihe ndepụta "Hichapụ".
Mgbe ị gụsịrị ị ga-ajụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ vidiyo site na ọwa gị, ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, wee pịa "OK".
Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ vidiyo na ọwa gị, ịchọta ihe ị chọrọ ka ihichapụ nwere ike igbu oge. N'okwu a, ọchụchọ ahụ nwere ike inyere gị aka.
Nchọpụta ọchụchọ maka ihe ndị gị bụ kpọmkwem na ngalaba ahụ. "Video", na akụkụ aka nri n'elu.
Enwere nhọrọ abụọ maka iji eriri a: dị mfe ma gbasie. Na mfe, ịkwesịrị ịbanye aha vidio ma ọ bụ okwu ụfọdụ site na nkọwa ahụ, wee pịa bọtịnụ ahụ na iko dị ebube.
Site na ọchụchọ dị elu, ị nwere ike ịtọ ụyọkọ nke ogidi ndị ga-enye gị ohere ịchọta kpọmkwem ihe nkiri site na ndepụta dum, n'agbanyeghị ókè ị nwere. A na-akpọ search dị elu mgbe ị pịa bọtịnụ ala.
Na windo nke gosipụtara, ị nwere ike ịkọwapụta ihe iche iche nke vidiyo ahụ:
okwu dị n'ime ya;
Mee nyocha site na ụdị nzuzo;
nyocha site na oge nke mgbakwunye.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro a na-enye gị ohere ịchọta vidiyo dị mkpa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị percent ziri ezi. Echefukwala ka ịpị bọtịnụ ahụ mgbe ịbanye na mpaghara niile. "Chọọ".
Dị mkpa ịmara: Enweghị ọrụ ọchụchọ maka vidiyo gị na ngwa ngwa YouTube.
Dịka ị pụrụ ịhụ, iji wepụ vidiyo site na YouTube, site na iji ngwaọrụ mkpanaka, ọ dịghị mkpa iji crank ọtụtụ manipulations; Ọtụtụ ndị na-ekwupụta na ọ dị mfe karị iji mmekọrịta nke YouTube na enyemaka nke mobile, ma taa, ngwọta a adịghị enye ohere zuru ezu. O di nwute, ọtụtụ ọrụ na ngwa ngwa YouTube adịghị arụ ọrụ, n'adịghị ka nsụgharị nchọgharị.